Dinagdee Cuquliisa: Kora dhimma qabeenya bishaan sirnaan fayyadamuurratti fuulleffate - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Feesbuukii Dr. Warqinaa gabayyoo
Korri 'Dinagdee Cuquliisaa' dhimma qabeenya bishaaniitti qindoominaafi sirnaan fayyadamuu irratti fuulleffate Naayiroobii, Keeniyaatti gaggeeffame milkiin xumurame.
Ministirri Dhimma Alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo 'Kora Dinagdee Cuquliisaa' (Blue Economy) Keeniyaatti qophaa'e kana irratti hirmaataniiru. Kora kana yeroo ibsan, "Waa'ee bishaanii irratti waltajjii gaggeeffamedha. Bishaan jechuun, galaanaa, garbaa, bishaan kan lafa keessa jiru. Karaa adda addaatiin biyyoonni bishaan qaban akkamiin fayyadamu akka itti danda'an muuxannoo waljijjiiruudha," jedhan.
Gama biraatiin jedhan Dr. Warqinaan, bishaan bakka tokkotti hin dhaabatu. Bakka tokkoo ka'ee gara biraatti deema waan ta'eef kana irratti waliin qindaa'anii qabeenya guddaa kana attamiin akka fayyadaman ilaalchisee mariin tures baayyee gaarii ture jedhan.
Faalama qabeenya bishaanii hambisuudhaaf waanti korri kun akeeke, keessattuu Itoophiyaa keessatti faalamni bishaanii bakka tokko tokkotti ammoo goginsi mudachaa waan jiruuf kan dhiyeesse yoo jiraateef gaafatamanii, dubbiin ijoo isuma kana akka ture ibsanii faalama pilaastika irraa jalqabee bishaan rakkoo summii irraa bilisa akka ta'u qindaa'anii hojjechuu irratti mariyatameera jedhan.
Dabalataanis akkamiin qabeenya bishaaniifi biyyoo kunuunsuun akkaataa itti danda'mu irratti qorannoon namoota beekamoodhaan dhiyaatee ture jedhan.
"Bakka goginsi jiru goginsa sana hir'isuufi bakka kunuunsi qabeenyaa gaariin jirus akka cimee itti fufu irratti muuxannoo bal'aa fudhannee jirra. Fuula duraafis hariiroo dippilomaasii keenyaafis kan dippilomaasii naannoo, dippilomaasii bishaanii jennee qabanne irratti waan gaarii waanta hedduu nu fayyadu argannee jirra," jedhan Dr. Warqinaa.
Korri kun dhimma kunuunsa naannoo irratti kan xiyyeefate yommuu ta'u yeroo jalqabaa Keeniyaatti qophaa'uu isaati.
Dhimmi ijoon kora kana irratti ka'e kan biraan qurxummuun seeraan ala akka malee qabamaa/kiyyeeffamaa jiraachuun yaaddoo addunyaa gama qabeenyaa kanaatiin jiru ta'uun beekamee akka tarkaanfiin atattamaa fudhatamuu qabu ka'ee ture.
Warreen Kora Dinagdee Cuquliisaa kana qopheessan BBC'tti akka himanitti, qophii ture baayyee kan milkaa'e ture garuu dogogora raawwatametu ture.
Dogoggorri kunis, qaruuraa bishaanii dabalatee pilaastikoota bishaan addunyaa kanaa akka malee faalaa jiran dhabamsiisuudhaaf kora taa'ame irratti hirmaattota yaa'ii kanaaf bishaan qaruuraa pilaastikaan dhiyeessuu ture.
Akka qopheessitoonni kun jedhanitti qaruuraa bishaanii pilaasikaa tokkollee waltajjii sana irratti fayyadamuun irra hin turre.
Ambaasaaddar Machariyaa Kamaawu, konfaraansii kana irratti qaruuraa bishaan pilaastikaa dhorkuun osoo danda'ameera ta'e faalama pilaastikaa balleessuudhaaf jalqabii gaarii ture jedhan.
Ergamaan Addaa Biyyoota Gamtoomanii kan bishaan Garbaa BBC'tti akka himanitti, Konfaraansiin Dinagdee Cuquliisaa kun sochii Afriikaan Garba kunuunsuuf taasiftu irratti akka addunyaatti mata duree haasa'amaa jiruu ta'eera jedhan.
Piiter Toomson akka jedhanittii, faayidaan qabeenya kunuunsuun akka itti fufinsaan jiraatu gochuun dubbii ijoo Konfaraansii kana irraa argamedha.